SiteKick: Udiyaargaree Warbixinta Falanqaynta Cad ee Calaamadda leh ee Macaamiishaada | Martech Zone
Haddii aad u shaqeyneyso macaamiil fara badan, dhisida warbixin aasaasi ah ama isku-dhafid ilo badan oo ku saabsan xalka dashboard-ka ayaa noqon kara mid aad u adag. SiteKick waxay ku maamuli kartaa dhammaan warbixinnadaada soo noqnoqda toddobaadle, bille, iyo warbixinno saddex-biloodle ah.
Warbixin kastaa waxay ku jirtaa qaab soo bandhigid (PowerPoint) waana la calaamadeyn karaa, oo lagu calaamadeyn karaa hay'addaada ama macmiilkaaga, natiijooyinka waa la tafatiri karaa ama macluumaad dheeri ah ayaa la bixin karaa ka hor inta aan loo dirin macmiilkaaga.
SiteKick wuxuu bixiyaa Faa'iidooyinka soo socda
Warbixinta Meelo Badan - Ku xidho xogtaada Google, Facebook, iyo / ama Microsoft, soo qaado akoonnada aad rabto inaad ka warbixiso, ka dibna u oggolow SiteKick inuu sameeyo inta kale.
Jaantusyo Awood leh - SiteKick wuxuu si otomaatig ah u dhisaa jaantusyo iyo garaafyo qurux badan oo ku lifaaqan sharaxaad qoran ee kanaal kasta.
Warbixinno badan oo Channel ah - SiteKick wuxuu falanqeeyaa kanaal kasta, isagoo ogaanaya aragtida muujineysa qiimahaaga: ololeyaal waawayn, natiijooyin cusub oo SEO ah, iyo inbadan.
Iswaafaq Iyo Miisaanka - SiteKick wuxuu falanqeeyaa qodob kasta oo xog ah, isagoo soo qaata natiijooyinka muhiimka ah, wuxuuna ugu gudbiyaa qaab iyo qaab isku mid ah. Macaamiil fara badan oo kooxdaada u ogolow natiijooyinka, ha u qorin warbixinnada gacanta.
Ololaha iyo Taariikhda Warbixinta - Dhammaan warbixinnada waxaa lala barbardhigi karaa xilligii hore ama isla xilliyadii la soo dhaafay ee macaamiisha xilliyeed.
Isku-darka Sitekick iyo Ilaha Xogta waxaa ku jira
Google Analytics - Crystal cad, fikradaha xirfadeed ee Google Analytics. Wuxuu sharaxayaa isbeddellada ku saabsan kal-fadhiyada macmiilka, beddelaadda, yoolalka, waxqabadka kanaalka, iyo bogagga degitaanka.
Google Ads - Warbixinta cad-cad ee Xayeysiiska Google ee muujineysa saameyntaada ku leedahay raadinta, muujinta, iyo ololeyaasha fiidiyowga. Ku darso kooxaha ad, ereyada muhiimka ah, weydiimaha, iyo inbadan.
Raadinta Raadinta Google - Ka warbixi qiimeynta ereyada muhiimka ah, dareenka raadinta dabiici ahaaneed iyo qiime-gujinta, iyo bogagga degitaanka muhiimka ah.
Ganacsiga Google - Warbixinta cad ee calaamadeysan Google My Business ee muujineysa saameynta aad ku leedahay wicitaanada maxalliga ah ee la soo saaray, codsiyada jihooyinka wadista, iyo dib u eegista ganacsigu helayo.
Facebook Ads - Si toos ah, faallo qoraal ah oo ku saabsan Xayeysiiska Facebook. Si cad u sharax masraxa, waxqabadka ololaha, oo muuji dhammaan siyaabaha dhagaystayaashu ula macaamilaan xayeysiiska macmiilka.
Bogagga Facebook - Warbixinta Bogagga Facebook ee macmiilka u sheegaya sida ay ula xiriiraan dhagaystayaashooda. Tus inta jeer ee dhagaystayaashu ku mashquulsan yihiin qoraalada oo ay bartaan waxa shaqeynaya.
Xayeysiiska Microsoft - Warbixinta xayeysiiska cad ee Microsoft Ads oo muujineysa saameynta aad ku leedahay ololaha raadinta, muujinta, iyo fiidiyowga. Ku darso kooxaha ad, ereyada muhiimka ah, weydiimaha, iyo inbadan.
Mailchimp - Ku muuji waxqabadka emaylkaaga adoo adeegsanaya wargelinta tooska ah ee 'Mailchimp'. Qodo maalmaha ugu wanaagsan ee la soo dirayo, khadadka maadooyinka ee ugu habboon, iyo cabirka dhagaystayaasha.
Email Emma - Ku muuji waxqabadka emaylkaaga adoo si toos ah u waraya Emma. Qodo maalmaha ugu wanaagsan ee la soo dirayo, khadadka maadooyinka ee ugu habboon, iyo cabirka dhagaystayaasha.
Waraaqaha Google - Ku dar xog kasta oo kale warbixinnadaada SiteKick, si otomaatig ah, adoo adeegsanaya isdhexgalka cusub ee Google Sheets. Ku abuur miisaska iyo jaantusyada saxda ah warbixintaada SiteKick, oo ay weheliso dhammaan iskudhafyada kale.
Hel Warbixin Bilaash ah Hada!
Tags: qalabka wakaaladawarbixinta macmiilkaEmma warbixintaxayeysiiska facebookxayeysiiska googleAnalytics googlegoogle ganacsigeygaraadinta google googleka warbixinta mailchimpxayeysiiska microsoftkoronto
Crello: Tifatire-Bixiye-Ad-Go-Tafatiraha Sawirada oo ay la socdaan Kumanaan Moodello qurux badan